Farshaxannada Muuqaalka - Columbus Arts Fest
Wadnaha Bandhig Faneedku waa muuqaalka quruxda badan ee bannaanka oo ka kooban fannaaniinta maxalliga ah, qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee soo bandhigaya shaqadooda. Farshaxannada garsoore ayaa u tartamaya inta u dhaxaysa 200 iyo 250 boosas oo ka mid ah in ka badan 900 oo kale oo soo bandhiga iyo kuwa soo baxaya. Fanaaniinta Waaweyn waxay ku biiraan fanaaniinta kale ee bartamaha Ohio ee Tuulada Farshaxanka Maxaliga ah. Farshaxannada sawir-qaadista, rinjilayaasha wejiga iyo kuwa kale waxay sawiraan oo qurxiyaan ka-qaybgalayaasha dhammaadka usbuuca dhammaadka.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku biirto safafka fanaaniinta la wadaaga shaqadooda Columbus Bandhigga Farshaxanka, eeg xulashooyinka hoose ama la xiriir Agaasimaha Bandhiga Sean Kessler at (614) 221-8625.
Fannaaniinta Garsoorka ah
Fanaaniinta Waaweyn ee Maxaliga ah
Fanaaniinta Tooska ah
Farshaxannada ugu fiican adduunka oo dhan ayaa kasbaday kaalinta heer qaran ee Bandhig faneedka Columbus ka dib markii ay ku tartamaan habka xeerbeegtida indhoolaha sannadlaha ah. Iyada oo loo marayo ZAPPlication ™, farshaxannadu waxay soo gudbiyaan afar sawir oo dhijitaal ah oo shaqadooda ah iyo hal sawir oo muujinaya bandhigooda. Xeerbeegtida dhibcaha fannaan kasta waxay ku salaysan yihiin oo keliya sawirada fanaaniinta iyo hadallada. Dhibcaha ugu sarreeya, fannaaniinta lagu casuumay waxay ka helaan goobtooda iyo suuq-geyntooda Bandhigga Farshaxanka, iyo sidoo kale fursad ay ku helaan abaal-marin lacageed.
Halkan ka arag abaal-marintii hore.
Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan habka codsiga ee bandhig faneedka, soo dejiso rajo dhammaystiran.
Codsigan hadda wuu xidhan yahay.
Farshaxano soo baxaya
Loogu talagalay fannaaniinta leh xaddidan ama aan lahayn khibrad ay ku soo bandhigaan xafladaha fanka waaweyn, Barnaamijka Farshaxannimada Soo baxaya waxa uu bixiyaa kharash hoose iyo tababar iibinta farshaxanka ee Bandhigga Farshaxanka Columbus. Farshaxanada codsanaya qaybtan waa inay ahaadaan deganayaasha Franklin, Union, Delaware, Licking, Fairfield, Pickaway, Fayette iyo Madison counties.
Farshaxannada soo baxaya ee mustaqbalka waxay ku codsadaan ZAPPlication™, si kastaba ha ahaatee, sawirkooda shanaad waa inuu noqdaa 1) kooxaynta shaqadooda ama 2) bandhig waab, haddii ay suurtagal tahay. Farshaxanadu waa inay doortaan "Barnaamijka Farshaxannimada Soo baxaya" sida qaybta edbinta ee ZAPPlication ™.
Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan habka codsiga ee fanaaniinta soo baxaya, soo dejiso rajo dhammaystiran.
Janaayo 29-30, 2022
Farsamoyaqaannada iyo kuwa sameeya ee ka socda badhtamaha Ohio waxay dooran karaan inay codsadaan meel la wadaago oo ku taal Tuulada Farshaxanka Weyn ee Maxaliga ah, beddelka codsashada boos sharciyeed. Farshaxanadaasi waxay bixinayaan komishanka Bandhig faneedka, halkii ay ka bixin lahaayeen kharashka rugta. Waxaan si gaar ah u soo dhawaynaynaa kuwa sameeya mudaaharaad-gacan-qabasho ah ee ka qaybgalayaasha!